Wordpress Error — MYSTERY ZILLION
September 2012 edited September 2012 in Wordpress
ကျွန်တော် WP ကို သွင်းပြီးတော့ Plugin သွင်းတဲ့အခါမှာ အဲ့လို့ ပေါ်နေလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါ၊
plugin သွင်း​ပီး​မှ ဖြစ်​တာ​လား? ဒါ​မှ​မဟုတ်၊ သွင်း​ဖို့​ရှာ​တုန်း​မှာ​ဖြစ်​တာ​လား။ ကို​ဘာ​လို ချင်​တာ​သိ​ရင်​တော့၊ ဒီ​မှာ​ရှာ​ပီး http://wordpress.org/extend/plugins/ manual သွင်း​ရင်​တော့​မြန်​မြန် ပြဿနာ​ရှင်း​နိူင်​တယ်။
အဲ့​လို​မ​လုပ်​ချင်​ဘူး​ဆို​ရင် wordpress ဘယ် version လဲ? server က​ဘယ်​လို​ဟာ​မျိုး​လဲ(shared hosting/self host etc) ? server ip က​ဘာ​လဲ?
latest wordpress version, free hosting, http://www.zymic.com/
not yet installed anything. not only plugins but also themes and so on.
error message seems general error message, so it can not specified.
what we can do is please check suitable path and owner permission of plugins and also see
server log near your above error log occurred.